Ntughari mmadu: Na-akwado okike nke Ntuziaka maka Storelọ Ahịa Ntanetị Loogic 2014 | ECommerce ozi ọma
Ntughari mmadu: Na-akwado okike nke Manual maka Online Stores Loogic 2014
Eva Maria Rodriguez | | eCommerce, Ọzụzụ ECommerce, Nkuzi na akuru
Ndị Asụsụ Loogic amalitela mkpọsa nke na-agbachi maka edezi ihe zuru ezu Akwụkwọ ntuziaka maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. N'oge mgbe azụmahịa, Akwụkwọ ntuziaka a ga-abụ compendium zuru oke e mepụtara ruo taa, na-ekpuchi isi ihe niile dị mkpa iji malite ụlọ ahịa na-aga nke ọma.
N’enweghị mgbagha, akwụkwọ ntuziaka a ga - abụ ezigbo ngwa ọrụ iji rụọ ọrụ azụmahịa igwe. Ọtụtụ ngwaọrụ dị maka ịmepụta ụlọ ahịa n'ịntanetị yana ozi gbasara isiokwu ahụ, ozi na-anaghị adị mfe nza na nyocha. Ọzọ anyị na-agwa gị ihe ị ga-ahụ kpọmkwem na akwụkwọ ntuziaka a, onye na-ahụ maka ọdịnaya na, nke kachasị mkpa, otú imekota na mkpọsa a (site na € 7).
2 Onye edemede
El Akwụkwọ ntuziaka maka Storelọ Ahịa Ntanetị Loogic 2014 ezubere nke ukwuu maka ndị ezubere imeghe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nakwa maka ndị nwere otu arụ ọrụ mana ha apụtabeghị oke ihe ha ga-eme iji nwee ọganiihu. Ihe ndị dị n’ime akwụkwọ ntuziaka ahụ mepụtara bara ezigbo uru n’okwu abụọ a. Ihe ndị a bụ ihe ndị a:
# 1 - Tydị e-commerce dị ka ebumnuche gị si dị
Isi nke mbụ metụtara nhọrọ abụọ eCommerce: 100% ụlọ ahịa na ụlọ ahịa n'ịntanetị na-eji ya e-commerce dị ka ọwa ahịa ọzọ.
# 2 - Typedị e-azụmahịa dị ka usoro ahịa
Isi nke abụọ na-emepe ụdị eCommerce dị iche iche iji ghọta ihe bụ nhọrọ dịgasị iche iche nke a ga-anabata, nke dị ole na ole. Isi okwu a gbasara ihe ndị a:
Igbe ma ọ bụ igbe ndenye aha
Klọb ịzụ ahịa
Na-echekwa ndị na-achịkọta ihe na mbadamba
White labeelu na-echekwa
# 3 - Echiche na e-commerce
ECommerce nwekwara jargon nke ya. Mara ihe okwu nke ọ bụla pụtara pụtara ịbụ onye nwere ike iji ihe ọhụụ ma ghọta nke ọma akụkụ niile metụtara mmepe na ndozi ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ọ bụrụ na inwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ị ghọtaghị otu n'ime echiche ndị a, ị kwesịrị imelite onwe gị. Echiche ndị mepụtara bụ ihe ndị a:
Mbupu na-akwụ ụgwọ: oke ibu
CAC: ọnụ ahịa nnweta ndị ahịa
Ọnụ ahịa ndị ahịa na-eme
# 4 - mentzọ ịkwụ ụgwọ
Obi abụọ adịghị ya, akụkụ bụ isi maka ihe ịga nke ọma nke eCommerce bụ ụdị ịkwụ ụgwọ. Isi nke a na-ekwu maka ụzọ ịkwụ ụgwọ ndị a:
# 5 - Nchịkwa ego
Ijikwa ọnụ ahịa nke ọma dị oke mkpa maka ịba ụba nke eCommerce, n'ihi na ọ bụghị naanị ịbụ onye dị ọnụ ala. A ghaghị itinye ọtụtụ njirisi n'ihi na ọnụahịa abụghị onye iro anyị kacha njọ. Iji mepụta isiokwu a, isi nke a na-ekwu maka isi ihe ndị a:
Estụ Isi (VAT)
Ego, nkwụghachi na nkwalite izugbe
Kupọns ego na nkwado Kupọns
# 6 - Nlekọta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Nke a bụ akụkụ maka ọrụ ndị ọzọ nke ijikwa eCommerce:
Carx ịzụ ahịa Ajax
Ndị na-azụghị aha
Nkwupụta na Ogo
Na-atụ aro na njikọ ngwaahịa
Usoro ndenye ọpụpụ
Nche na njikwa data ndị ahịa
Nkwurịta okwu na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa
Sọftụwia ihe eji eme ihe n'ịntanetị
Bochum maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Iwu emetụtara azụmahịa kọmputa
Ọzụzụ maka e-azụmahịa
Nddị na e-azụmahịa
Onye na-ahụ maka ọdịnaya nke Ntuziaka Ntanetị nke Ntanetị bụ Ignacio de Miguel, onye nchịkọta akụkọ nke Loogic.com, otu n'ime blọọgụ azụmahịa n'ịntanetị kachasị mkpa n'asụsụ Spanish, na ọkachamara eCommerce. Otu n'ime ọrụ ọ na-ekere òkè na ya bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị TierraDeCerveza.com, nke ọ bụ onye ibe ya, yana Itandvip.com, nke ọ na-arụ ọrụ dị ka isi nke teknụzụ azụmahịa kọmputa.
Ejirila ikpo okwu amalite mkpọsa igwe mmadụ Tụba anyị, ma nwee ngụkọta ego nke euro 4000. Izu abụọ ka emechara ya, ọrụ a ebulitela karịa 80% nke ngụkọta dị mkpa iji dịrị ndụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ isonye ma kwado ọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ime ya site na 7 €.
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na ịchọrọ ịkwado ngalaba ma ọ bụ pụta dịka ụlọ ahịa a ma ama, ịnwere ike ịme ya site na onyinye site na € 200.
Iji kwado mkpọsa iji mepụta Akwụkwọ ntuziaka maka Storelọ Ahịa Ntanetị Loogic 2014 gaa na oru ngo na Lanzanos.com/projects/manual-for-online-stores/. Bọchị 16 fọdụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » Ntughari mmadu: Na-akwado okike nke Manual maka Online Stores Loogic 2014
A ka nwere ụbọchị iri fọdụrụnụ ma ọrụ a ebulitela ihe karịrị 10%! Ọganiihu zuru ezu.
María Domíngez, onye isi oche nke Openley, na-agwa anyị banyere ahụmịhe ya na mpaghara eCommerce
Echefula thelọ Ahịa etalọ Ahịa 2014 na-esote June 11 na Madrid